အနုပညာရှင်ရပ်ဝန်း – Page 11 – Khit Lunge
ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မိုးမိုး တစ်ယောက် ကတော့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ပြောပြလာပါတယ်။ ” လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ပွဲတစ်ပွဲ လှမ်းချိတ်တယ်ကိုယ်ကလဲ အစ်ကိုတစ်ယောက်လိုချစ်ရတဲ့သူကလှမ်းပြောပေးထားလို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးနိုင်သမျှ ကူညီပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်(သူ ပြောတာလဲ မိုးမိုး လာဆိုပေး တခြားသူတွေလဲချိတ်ပေးလို့ပဲ သေချာပြောတာပါကိုယ်အပါအဝင်လို့ သေချာပြောတာပါ)” ဆိုပြီးပြောပြလာပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး “ဒါနဲ့ ဖုန်းဆက်လာတော့ဘတ်ဂျက် ဘယ်လောက်သုံးပါမယ်ကိုမိုးမိုးနဲ့ အခြား မိန်းကလေးအဆိုတော်တစ်ယောက် နဲ့ လိုချင်ပါတယ်…
လူငယ်ကြိုက်တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟန်ထူးလွင် (ကျားပေါက်) ဟာ Big Bag အဖွဲ့ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဂီတလောကမှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ အောင်မြင်နေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှာတော့ ကျားပေါက်က သူ့ရဲ့ ဇနီး စုလဲ့ဝင်း (ဇုံဇုံ) နဲ့ တရားဝင် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲလိုက်ပြီလို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာပါတယ်။ မထင်မှတ်ထားတဲ့ သတင်းစကားကြောင့် ပရိသတ်တွေခမျာ တော်တော်လေး ထိတ်လန့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။…
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ အမှုများကို ဇာတ်တည်ပြီးသရုပ်‌ဆောင်များစွာနှင့်နောက်ထပ်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးတော့မည့် ဇဏ်ခီ
ဇဏ်ခီကတော့ ဇာတ်ညွှန်းအသစ်တစ်ပုဒ်ရေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဇာတ်ညွှန်းကိုတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ (သို့မဟုတ်) ရုပ်ရှင်အဖြစ် ရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ မီဒီယာ အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။“P.I.T ဆိုပြီးတော့ ပြောထားဖူးတယ်။ Private Investigation Team ဆိုပြီးတော့ အလွတ်စုံထောက်တွေဖွဲ့ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာပဲရှိတဲ့ အမှုတော်တော်များများကို ဇာတ်တည်ပြီးတော့ ရိုက်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေးလည်းရေးနေတုန်းပါ။ TV Series ကနေ အခု ရုပ်ရှင်ဘက်ပြောင်းမလားလို့ ပြန်ပြီးတွေးနေကြတယ်’’ လို့…
ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီနယ်လှည့်စည်းရုံးရေးမှူး ဖြစ်သွားလို့ သူ့ကိုBlockချင်က Blockနိုင်ကြောင်းကြေငြာလိုက်တဲ့နိုင်လူ
ယနေ့မှစ၍အတည်ဖြစ်စေရမည်ကျွန်တော်သရုပ်ဆောင်နိုင်လူသည်ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့နှင့်သဘေားထားမတူသည့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများယနေ့မှစ၍သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအဖြစ်မှရပ်ဆဲနိုင်သည်မည်သူကိုမဆိုချစ်ခင်သော်လည်းအမှန်တရားကိုသိသော်လည်းမျက်လုံးဇုံမှိတ်၍အသိမရှိနားမလည်နိုင်သေားသင့် ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေလို‌သည့်အတွက်ယနေ့မှစ၍ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီဝင်နိုင်လူကိုblockနိုင်ပါကြောင်းပြည်သူကိူဗဟိုပြု၍နိုင်လူနယ်လှည့်စည်းရုံးရေးမှူးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးယာယီစည်းရုံးရေးကော်မတီအဖွဲဝင်ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ ( Unicode ) ယနမှေ့စ၍အတညျဖွဈစရေမညျကြှနျတျောသရုပျဆောငျနိုငျလူသညျပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီဝငျတဈဦးဖွဈသညျ့အတှကျကွောငျ့မိမိတို့နှငျ့သဘေားထားမတူသညျ့မိတျဆှသေူငယျခငျြးမြားယနမှေ့စ၍သူငယျခငျြးမိတျဆှအေဖွဈမှရပျဆဲနိုငျသညျမညျသူကိုမဆိုခဈြခငျသျောလညျးအမှနျတရားကိုသိသျောလညျးမကျြလုံးဇုံမှိတျ၍အသိမရှိနားမလညျနိုငျသေားသငျ့ ကိုစိတျအနှောကျအယှကျမဖွဈစလေို‌သညျ့အတှကျယနမှေ့စ၍ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီဝငျနိုငျလူကိုblockနိုငျပါကွောငျးပွညျသူကိူဗဟိုပွု၍နိုငျလူနယျလှညျ့စညျးရုံးရေးမှူးရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးယာယီစညျးရုံးရေးကျောမတီအဖှဲဝငျပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ
ကျွန်မက လှပြီး ထက်မြက်တဲ့အတွက် မာနကြီးရင်ကြီးလို့ရသလို ချေရင်လည်းချေလို့ရတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
မြန်မာကိုယ်စားပြုအလှမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ကတော့ လက်ရှိမှာဆိုရင်အလှမယ်တစ်ယောက်သာမကသူ့ရဲ့ချောမောလှပတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်လည်းသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ကတော့အရမ်းလှပကျော့ရှင်းတဲ့ မျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကမ္ဘာ့အလယ်မှာမြန်မာကိုဂုဏ်တက်အောင် လုပ် ဆောင်ပေးနေတဲ့အလှမယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေအိမ်စည်ဟာသူမရဲ့နဂိုကတည်းကခပ်တည်တည်နေတတ်တဲ့ မျက်နှာထားကြောင့်ချေတယ်မာနကြီးတယ်လို့အမြဲလိုလို အထင်ခံရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေအိမ်စည်ကသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာသူမကစိတ်ဆိုးနေတာလည်းမဟုတ်ချေနေတာလည်းမဟုတ်ပဲ နဂိုမျက်နှာပါပဲလို့မကြာခဏဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်တိုင်းရှင်းပြလေ့ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုပဲရှင်းပြပေမယ့်လည်းအချို့သူတွေကတော့အိမ်စည့်ကိုမာနကြီးတယ်လို့ ထင်နေကြဆဲဖြစ်ပါ။ဒါပေမယ့်အိမ်စည့်ပရိသတ်တွေကတော့အိမ်စည်ဘယ်လိုနေနေချစ်နေကြတာပါပဲ။ရွှေအိမ်စည်က မကြာသေးမီက သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာသူမရဲ့ Selfie ဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူသူမကလှပြီးထက်မြက်တဲ့အတွက် မာနကြီးချင်လည်းကြီးလို့ရသလို ချေလည်းချေလို့ရတယ်လို့ပြတ်ပြတ်သားသားပဲပြောထားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေအိမ်စည်ကသူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ခပ်ချေချေဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့အတူ “Yes I am high maintenance because I maintain…
ပရိသတ်တွေကြား အပြုံးချိုချိုလေးတွေနဲ့ သီချင်းတွေကို တန်ဆာဆင်ပြီး သီဆိုကာ ပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းနှလုံးကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်တဲ့ ထက်အဉ္ဇလီကတော့ “Myanmar Idol Season4ဝင်ပြိုင်လိုက်မိတာ ထက်အတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေ တခုပြီး တစ်ခု ရောက်လာစေပါ တယ်။ (၄)တန်းကတည်းက ခွဲခွာနေခဲ့ရတဲ့ ပါပါးနဲ့လဲ မထင်မှတ်ပဲ ပြန်လည် ဆုံစည်းခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။Myanmar Idol က တာဝန်ရှိသူများ တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကို…
ဖိုးဖိုးကြီး ဇော်ဝင်းထွဋ်က မြေးလေးတွေနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ အားလပ်ရက် အဖိုးတန်အချိန်လေးတွေကို အတူဖြတ်သန်းပေးနေပါတယ်တဲ့။ အီတိုးနဲ့ ဝင်းထွဋ်တာရာ ငယ်စဉ်အချိန်က သမီးဖြစ်သူ ဝင်းထွဋ်တာရာကမွေးထားတဲ့ မြေးလေး ကေသရာထွဋ်နဲ့အတူ အဖော်လုပ်ပေးရင်း မြေးလေးတွေနဲ့အတူ ပန်းချီကူဆွဲပေးနေခဲ့တာပါ။ ဒါကို သမီးဖြစ်သူ ဝင်းထွဋ်တာရာက ဝမ်းသာစွာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း Rocker ကြီးနဲ့ မြေးလေးတွေရဲ့ ချစ်စဖွယ်မြင်ကွင်းလေးကို သဘောကျနေခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ကလေးတွေဟာ ဖိုးဖိုးကြီးရဲ့…
ရုပ်ရှင်တစ်ကားရိုက်ရဖို့အရေး ပေါင်၂၀လောက် ၀ိတ်လျှော့ရတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောမင်းသား
မကြာသေးခင်ကရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီရဲ့ တတိယမြောက် ဖန်တီးမှုဖြစ်တဲ့ “ထာဝရနှောင်ကြိုး”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဇာဏ်ခီနဲ့ မင်းသမီး ပိုင်ဖြိုးသုတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ရိုမန့်တစ် ဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကို “ထာဝရနှောင်ကြိုး”အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးက အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တာနဲ့ အညီ အဓိကအနေနဲ့ မင်းသားဖြစ်တဲ့ ဇာဏ်ခီကတော့ ဇာတ်ရုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဇာဏ်ခီကတော့ ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ “သီဟ”အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဇာတ်ရုပ်အတွက်လိုအပ်တာကြောင့် ဝိတ်ကို…
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုလောကရဲ့ အက်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်လို့ဆိုရလောက်အောင် အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် နာမည်ကြီးပြီးလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်တဲ့ နေထူးနိုင်ကတော့ နှစ်တော်တော်ကြာကြာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုတွေကို ရပ်နားခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဇာတ်ကားတွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ နိုင်ငံကျော် မင်သားကြီး ဂျင်မီဂယ်ရီဂျူနီယာနဲ့ပါ ဖုန်းပြောဆိုနေတာဖြစ်ပြီး “ဘာတွေပြောကြမယ်ထင်လဲ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ ခန့်မှန်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ နေထူးနိုင်နဲ့ ဖုန်းပြောဆိုနေတဲ့ ဂျင်မီဂယ်ရီဂျူနီယာကတော့ နိုင်ငံကျော်မင်သားကြီးဖြစ်ပြီး သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ‘Happy. Thank You….
Posted on November 16, 2019 November 16, 2019 by KL
နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် နေမင်းဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ အားပေးမှုများစွာရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင် ပါ။နေမင်းက တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေ စောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတဲ့ Myanmar Idol season4သီချင်းပြိုင်ပွဲမှ ပြိုင်ပွဲဝင် နော်စေ့စေ့ထူး Save လုပ်ခံရလို့ ဂုဏ်ပြုစကားဆိုလိုက်တဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင် နော်စေ့စေ့ထူး က တက္ကသိုလ် သီချင်းနဲ့ ပြိုင်ကြရာမှာ အရမ်းအန္တရာယ်များတဲ့ ထိုင်ခုံမှာ…